Tallaabooyinka lagu gaarayo xiirashada qumman, talooyinka ku habboon dhammaystirka | Ragga Stylish
Sidee loo helaa xiiro qumman
Paco Maria Garcia | | La cusboonaysiiyay 21/04/2017 20:08 | La xiiray
Rag badan ayaa u maleynaya xiirashada inay tahay wax maalin kasta xanaaqa oo caadi ah. Xaalado badan, xiirashada waa ficil si dhakhso leh loo fuliyo, iyada oo aan la tixgelin khataraha maqaarka.
Si kastaba ha noqotee, xiirista qumman ayaa yeelan karta cawaaqibxumo badan oo caafimaad leh. Sidaa darteed, u heellan iyo feejignaan habboon ayaa looga baahan yahay inay si sax ah u sameeyaan oo ay u adeegsadaan sidii daaweyn qurux badan oo wax ku ool ah.
1 Mindhicirka xiirista leh Blade, mandiil, mandiil?
1.2 Makiinada miiqda, ayaa ah kuwa ugu xiiran ee caadiga ah
2 Qaar ka mid ah talooyinka wax ku oolka ah ee xiirashada ugu fiican
Mindhicirka xiirista leh Blade, mandiil, mandiil?
Waxay kuxirantahay qalabka aan isticmaalno, dhammaystirku wuu ka duwanaan doonaa xaalad kasta.
Iyagu waa kuwa ugu caansan. Waxaa jira noocyo badan, adkaysi badan oo ka yar, oo leh tiro yar oo haad ah, iwm. Mararka qaar ma aha fikirkaas wanaagsan in la keydiyo oo la iibsado tayo ka sii xun.
Makiinad koronto ku shaqeysa
Wixii ah maqaarka xasaasiga ah, ayaa ah ta ugu badan ee ay ku taliyaan khabiirada. In kasta oo mararka qaarkood aysan waxtar u lahayn xiirashada kaamil ah sida mandiil ama aaladaha, si loo gaaro dhammeystirka ugu fiican ayaa loo maqaarka qalalan.
Makiinada xiiradu maaha xulashada ugu fiican garka xiirta. Haddii timuhu way adag yihiin oo waa iska caabiyaan.
Marka laga hadlayo gadhka wanaagsan, mandiillada ugufiican ayaa lagugula talinayaa, aad u jilicsan lana maamuli karaa.
Makiinada miiqda, ayaa ah kuwa ugu xiiran ee caadiga ah
El waqtiga xiiriddu waa ka dheer tahay makiinada, laakiin in lagu degdego ayaa ka weyn iyo waliba faa iidooyin badan oo maqaarka ah.
Qaar ka mid ah talooyinka wax ku oolka ah ee xiirashada ugu fiican
Looma xiirayo maqaarka maqaarka leh, kaliya toos. Fikrad ahaan, wakhti qaado, tusaale ahaan, markaad quraacayso.
Nadiifinta kahor. Waa in maqaarka ku nadiifi saabuun iyo biyo qabow, taas oo ka caawisa dib u hawlgelinta.
Xiirashada maalin kasta ma ahan mid lagu talin karo. Waxaa ugu wanaagsan in maqaarka la siiyo waqti nasasho ah.
Cuntada in aan codsanno waa inay ahaadaan oo tayo leh.
El xiirasho la'aan, oo leh degganaan.
La fuuq bax maqaarku waa muhiim.
Ilaha sawirka: Punto Fape / YouTube
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » La xiiray » Sidee loo helaa xiiro qumman